September 2008 ~ Test
စိတ်ထဲရှိရာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်
Tuesday, September 30, 2008 Feeling, Zoom Feature9comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ် ထဲက ကွန်မန့် ထဲမှာ အမည် မသိ ညီလေး တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့စိတ်ထဲ ရှိရာ အမေ ကို တမ်းတတဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ် ရင်ထဲက လွှတ်ချသွားတယ် ဗျာ ..။
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ကျွန်တော်လဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အမေ နဲ့ပါတ်သက် ပြီး ရင်ထဲမှာ စူးစူးနစ်နစ် ကိုခံစားနေရတာနဲ့ သူ့လွှတ်ချလိုက်တဲ့ ခံစားချက် ကဗျာလေး က ကျွန်တော့ ရင်အစုံ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကို တိုက်ရိုက်ထိမှန် ခဲ့ပါတော့တယ် ဗျာ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို ကိုယ်စားရေးပေး သွားသလို ခံစားလိုက် ရတဲ့ အတွက် သူက အကို စိတ်ထဲ ရှိရာ ခေါင်းစဉ် ပေးလိုက်ပါ ဆိုလို့ ကျွန်တော့ စိတ်ထဲ ရှိတာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စိတ်ထဲရှိရာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်လို့ ပဲ ပေးလိုက်ပါတယ်...။
အမေ ဆိုတာ က မွေးလာ ကြတဲ့ အားလုံးသော ဘလော့ဂါ ညီကို မောင်နှမ အပေါင်း ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ..။
ဘာမှ တော့ မဆိုင်ဘူး..
အစ်ကို့ရဲ့ blog ကိုကြည့်ပြီး
အမေ့ကို သတိရလို့.. စိတ်မရှိပါနဲ့....
ခေါင်းစဉ်ကတော့ အစ်ကို စိတ်ထဲရှိတာ ပေးလိုက်ပါ.
ပြည်လုနီးပါးနဲ့ ယိုင်နဲ့နဲ့ အိမ်ငယ်
ဘ၀င်မြင့်တယ်လို့ ပြောမလား မသိနိုင်တဲ့
အဲဒီ မိခင်လေ ရင်နဲ့ ရင်းပြီး
သားတွေကို သူ့ရဲ့ ရင်ငွေနဲ့
လူမှန်း သိတတ်စ ကလေးငယ်တွေကို
သူ့ ပခုံးနဲ့ ထမ်းတင်ပေးခဲ့တယ်။...။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး များ
Tuesday, September 23, 2008 Tag Post, Zoom Feature 13 comments
အကိုကြီး အောင်သာငယ် တက်ဂ် လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး တွေကို မနည်းကြီး ကိုစဉ်းစားပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်...။
ပထမဦးဆုံး ရခဲ့သည့်မုန့်ဖိုး~~~~~~~~~ ၁၀ ပြား ၊ရေခဲချောင်းတစ်ချောင်း ၁ ပြား ၂ ပြားခန့်သာပေးရသည်၊ကပ်စီးနဲ အလုံးကြီးမှ ၂ ပြား..
ပထမဦးဆုံး စီးဘူးသည့် ဘက်စ်ကား~~~~~ (၁၆) ကားကို စီးပြီး ပုဇွန်တောင် ကို ကျောင်းသွားတက် ရစဉ်က ပထမဆုံး စီးဖူးခြင်း ကားခက လှည်းတန်းမှ လမ်း ၅၀ ထိ ၅ ပြား တစ်ခါတစ်လေ စပယ်ယာက ကျောင်းစိမ်းနှင့် ကလေး မို့မတောင်းလျှင် ကျောင်းမုန့်စားတန်း မှ အသုတ်တပွဲ ဝယ်စား၍ ရသည်
ပထမဦးဆုံးကျောင်းပြေးဖူးသည့်အချိန်~~~~~~(၆)တန်း ကျောင်းသား ဘဝ တစ်ယောက်ထဲ မြို့ထဲသွားပြီး On The Road ဆိုသည့် ဂျပန် အချစ်ကားလေး သွားကြည့်သည်..။
ပထမဦးဆုံး ဂစ်တာတီး သင်ရင်းဆိုခဲ့သည့် သီချင်း~~~~~~ဖိုးချို ၏ မင်းဘယ်လမ်းသွားသွား သီချင်း သူက C Am Dm G ရောင်းဒ် ကောဒ့် ဆိုတော့ လွယ်တယ်လေ
ပထမဦးဆုံး ထိုင်ဖူးသည့် လဘ္ဘက်ရည်ဆိုင်~~~~~တာမွေ ကျားကွက်သစ်ထဲက ရာမကွင်းတွင် ညဘက် ဖွင့်သည့် ဆိုင် သူက ညမှ ကွင်းထဲတွင် ဖျာများခင်း၍ ထိုင်ရသည် ခွေးခြေ ဟုခေါ်သော ခုံပု များ မသုံးပါ..။
ပထမဦးဆုံးသောက်ဖူးသည့် စီးကရက်~~~~~~ဇင်ဇင်း, XinXing ဟုပေါင်းသည်ထင်သည် တရုပ်ပြည်မှ လာသည်
ပထမဦးဆုံးရည်းစားထားဖူးသည့် အချိန်~~~~~~~~၁၅ နှစ် ၁၀ တန်းကျောင်းသား ဘဝ
ပထမဦးဆုံးဖတ်ဖူးသည့်ဝတ္တုစာအုပ်~~~~~~~~စောညို ၏ စနေထွန်း ထိုစဉ် က ကျွန်တော် သုံးတန်း ကျောင်းသား အမေ ဝတ္တုဖတ်တိုင်း ရင်ခွင်ထဲ ဝင်ပြီး လိုက်ဖတ် တတ်သည် ကျွန်တော် ဖတ်၍မပြီးသေးလျှင် အမေလဲ နောက် တစ်မျက်နှာ မကူးပြောင်းနိုင်၍ အလွန်စိတ်ညစ်သည်..။
ပထမဦးဆုံး ဖတ်ဖူးသည့် ဘာသာရေးကျမ်း ~~~~~~ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ပြုစုသည့် ဇိနထ္တပကာသနီ ဗုဒ္ဒဝင် ကျမ်း
ပထမဦးဆုံး အရက်မူးဖူး သည့်အချိန်~~~~~~~~~ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အကို က သူ့သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင် မင်္ဂလာဦးည နန်းသီတာတွင် သူငယ်ချင်းများ ကိုပြုစုသည့် ပွဲ သို့ခေါ်သွားပြီး အကို့သူငယ်ချင်းများ တစ်ယောက်နည်းနည်း စီ ဝိုင်းတိုက် ရာ မှ ဒေါင်ချာစိုင်းအောင် စ၍ အရက်မူးဖူးသည် ထိုစဉ်က ကျွန်တော် သူငယ်တန်းကျောင်းသား
ပထမဦးဆုံး ပစ်ဖူးသည့် သေနတ်~~~~~~~~~သူကြီး ဘစီ ကိုင်သော နှစ်လုံးပူးဟု ခေါ်သည့် သေနတ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖေ့ မှာ က နှစ်လက်တောင် ရှိသည် အဖေက တပ်မတော် က အငြိမ်းစား ပီပီ သေနတ်မရှိ မနေတတ် :P အဖေ့ ကို နယ်က တပည့်တွေ လာခေါ်လို့ အမဲလိုက် သွားတုန်းက ကျွန်တော် ပါလိုက်သွားပြီး ပစ်ဖူးတာ...။
ပထမဦးဆုံး ရောက်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံခြား~~~~~~~~ စင်္ကာပူ
ပထမဦးဆုံး ရေးခဲ့သော ဘလော့ဂ် ပိုစ့်~~~~~~~~လူပျိုကြီးနဲ့ခွေးပါရဂူ
ကဲ ကျွန်တော် သတိရသလောက် ပထမဆုံးလေး တွေပါ အပြည့်အစုံတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်ချည်းပဲ အတဂ် ခံနေရတော့ ဒီတစ်ခါ ညီတွေ ညီမတွေ ကိုပါ ဆွဲခေါ်တော့မယ် ဟီး ဟီး
ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲ ရှိရာ ပထမဆုံး တွေ ဖြစ်ရင် ပြီးတာပါပဲ ကျွန်တော် ရေးထားသလို ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး
ကျွန်တော် ဆက် တဂ် မည့် ညီတွေ ညီမတွေ ကတော့
ဘလက်ဒရင်း(ရေးပြီး) , ညမီးအိမ်(ရေးပြီး) ,ထိုက်မင်း(ရေးပြီး) ,ဇောင်း(ရေးပြီး) ,ကြယ်ဇင်သွေး(ရေးပြီး) ,အိမ်(ရေးပြီး) ,မိုးသောက်ယံ(ရေးပြီး) ,
မောင်မျိုး(ရေးပြီး) ကတော့ ကို အောင်သာငယ်တဂ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့်လို့ ထပ်ထည့်ထားတယ်
နတ်သမီးလေး မွန်(ရေးပြီး) ,Apprenticeship(ရေးပြီး) ,အိမ်လေး ,မေမိုးမခ(ရေးပြီး) ,မီးငယ်(ရေးပြီး) ,မေမိုး(ရေးပြီး) ,ဝေလေး(ရေးပြီး) ,အမရာ(ရေးပြီး)
ပထမဦးဆုံး တဂ် တဲ့ တဂ် ပိုင်ရှင် ကိုအောင်သာငယ် ပြောသလို ပါပဲ အဆင်ပြေမှ ရေးပါ အဆင် မပြေလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး ဝိစ္စ လောက်ပဲ ရှိမှာ ...။
Tuesday, September 09, 2008 Comdey, Zoom Feature6comments
အရင်သင်္ဘော လိုက်တုန်းက အဖြစ်အပျက် လေး တစ်ခုကို ပြန်သတိရလို့ ရေးလိုက်တာပါ..
ဖတ်ပြီး ပြုံးရုံကလေး ပြုံးရတယ် ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော် ရေးရကျိုး နပ်ပါပြီ ..
ကျွန်တော် တို့ သင်္ဘော က ကွန်တင်နာ တင်တဲ့ သင်္ဘော အိန္ဒိယ ကလကတ္တား မြို့ကို အမြဲ ရောက်လေ့ ရှိတယ်..
အဲဒီမှာ အိန္ဒိယ အခံ ကုမ္ပဏီ ကနေ သင်္ဘောပေါ် မှာ ကုန်တင် ကုန်ချ လုပ်ရင် ကူညီဖို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ ကုမ္ပဏီ ကလူယုံ တွေခန့်ထားပေးတယ် ..
အမြဲတန်း တွေ့နေကြ ဆိုတော့လဲ ခင်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာ ...
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီထဲက ကောင်လေး တစ်ယောက် လက်ထပ် သွားတယ် ဗျ
သူ လက်ထပ်ပြီး သွားချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် တို့ သင်္ဘောလဲ ၄ လ လောက် အိန္ဒိယ ကို မရောက် ဖြစ်တော့ဘူး
အဲ ၄ လ ကြာပြီးသော အခါပေါ့ဗျာ
ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ် အိန္ဒိယ ကိုပြန်ရောက်ပါတော့တယ်..
အဲဒီမှာ ထုံးစံ အတိုင်း အလုပ်သမား လေး တွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါလေရော..
ခုနက လက်ထပ် သွားတဲ့ ကောင်လေး ကိုလဲ ပြန်တွေ့ပါတယ်
ဒါနဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း နေကောင်းလား အဆင်ပြေလား မရောက်တာကြာပြီ ဘာညာ သာရကာ နေကြာကွာစိ ဘလာ...ဘလာ...ဘလာ ပေါ့ဗျာ ပြောကြရင်းနဲ့...
ကောင်လေးက ပြုံးဖြီးဖြီး နဲ့ သူ့ဗိုက်ရှေ့မှာ လက်ကလေး ဝေ့ဝိုက်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အားလုံး မျက်နှာပိုး မသပ် နိုင်လောက်အောင် ရီမော မိကြပါတယ်
Now my wife is Baby Loading.
ပါတဲ့ ခင်ဗျာ သူအမှန်တကယ် ပြောချင်တာ ကတော့ အခု သူ့မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားပြီလို့ ပြောချင်တာပါ
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် တာကို ဘယ်လို့ပြောရမှန်း မသိတာနဲ့ သင်္ဘော ပေါ် ကုန်တင်ရင်Cargo Loading လို့ ပြောတာ ကို သူကလဲ သူ့မိန်းမ ဗိုက်ကြီးနေတာ ကို အစားထိုး သုံးလိုက်တာပါ...
Wednesday, September 03, 2008 Tag Post, Zoom Feature3comments
ဟို တစ်နေ့က အလုပ်က အပြန် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး ဖွင့်ကြည့်လိုက် တာ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်
ဘာဖြစ်သွားသလဲ လို့တော့ မမေးနဲ့ ဟိုကောင်မလေးလေ ကျွန်တော် ကတော့ မိဆိုးလေး လို့ပဲခေါ်တယ်
ဆိုးသော..ပျင်းသော.. စာမကျက်သော.. ဂျီကျတတ်သော....ဝက်ဝံရုပ်ကလေး များ ကို ချစ်လွန်းလို့ ဝက်ဝံရုပ် ပေါက်နေသော အဟိ မီးငယ် လို့ခေါ်တဲ့ သရဲနီ ကောင်မလေး လေ တက်ထားတယ်တဲ့...
ဘလော့ဂ်မှာ ကိုယ့်ဖာသာတောင် ကိုယ် ပိုစ့်မရေး နိုင်လို့ ပစ်ထားတာ ကို သူက လာတက်သွားတယ်လေ
ဒါနဲ့ အလုပ်နားတော့ မှ ရေးမယ် ဆိုပြီး ထား ထားတာ ဟော နေ့လည်က တစ်ခါ နောက်ထပ် ညီမခပ်ဆိုးဆိုး နတ်သမီးလေး ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့မလိုက် အောင် ဆိုးတဲ့ မေချောက်ဖုံ ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ အရမ်းလိုက်တဲ့ နှပ်သမီးလေး မေချောက်ဖုံ ကလာထပ်ပြီး ဒီ ကိုယ့်အကြောင်းရေးပါ ဆိုတာ လာတက် သွားပြန်ပါရော..။
အဲဒီတော့လဲ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံးတော့ညီမ ဆိုးတွေနဲ့ပဲ တွေ့ရတဲ့ ကိုယ့်ဘဝလေး ကို ကိုယ်သနားပြီး နားရက်ကလေး ကို သူတို့ တက်ဂိမ်း ကြီး အတွက် ပေးလိုက်ပြီး ရေးလိုက် ရပါတော့တယ် အောက်မှာ သာ ဆက်ဖတ် ကြည့်ကြ ပါတော့ဗျို့...။
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ်….................................................... စိန်လင်းထက်၊ဆရာလင်းထက် :P
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်….................................................... အမိုးကောင်းကင် အခင်းမြေကြီး
အရောင်ဆိုရင်….................................................... အညိုရောင် (ယောဂီရောင်ပေါ့)
အ၀တ်အစားဆိုရင်….................................................... လူတောထဲ သွားနိုင်ရင် ပြီးတာပါပဲ
အစားအစာဆိုရင်….................................................... အဟဲ ဒါတော့ နဲနဲ များလို့ မပြောတော့ ပါဘူး
ပစ္စည်းဆိုရင်….................................................... လျှပ်စစ် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းမှန်သမျှ
သီချင်းဆိုရင်….................................................... ဆိုင်သူကိုယ်စီမို့ (ခိုင်ထူး)
စာအုပ်….................................................... ဖတ်လို့ရသမျှ အကုန်ကြိုက်
Life style….................................................... မတောင့်မတ မကြောင့်မကျ လေး နေရရင် တော်ပါပြီ
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်….................................................... ဟဲ ဟဲ သူများပေးရင်တော့ မလိုချင်တာ မရှိဘူးထင်တာပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက….................................................... ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်တဲ့သူ
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက….................................................... လေးစားထိုက်သူမှန်သမျှ ပါပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက….................................................... မရှိတာ ကြာပေါ့
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက….................................................... ကိုယ့်လောက် တော့ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို နားလည်မပေးနိုင်ကြဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ….................................................... ကိုယ့်ကိုယ် အတင်းပြောတဲ့သူ
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်….................................................... ရည်းစား အသစ်တစ်ယောက်ရတိုင်း
အကြောက်ဆုံးအချိန်…..............................................လူကြားထဲအိမ်သာတက်ချင်တာ အိမ်သာရှာမတွေ့တဲ့ အချိန်
အချစ်ဆိုတာ….................................................... ပူလိုက် အေးလိုက်နဲ့ခံစားရတော်တော်ခက်တဲ့ အရာ
အမုန်းဆိုတာ….................................................... သူလဲ အချစ်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ
အလွမ်းဆိုတာ….................................................... ဝေးကွာသွားသူတို့ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာ
သံယောဇဉ်ဆိုတာ….................................................... အချစ်ထက် ကို ပိုမို ခိုင်မာတဲ့အရာ
ချစ်သူဆိုတာ….................................................... အမြဲသောကတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေါင်းစပ်နေတဲ့သူ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်….................................................... ငါခုချိန်ထိ ဘာမှ မလုပ်ရသေးပါလား
ကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲဆောင်ပုဒ်က….................................................... မလုပ်နိုင်တာ မရှိ မလုပ်တတ်သေးတာပဲရှိမယ်
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း….................................................... အခုစာကို ဖတ်ရသူတိုင်း ကျွန်တော့် ကို ထပ်ပြီး မတက် (Tag ) ကြပါနဲ့ဗျို့